CES 2018: Panasonic na-egosi TV ya OLED | Akụkọ akụrụngwa
Eder Esteban | | Foto na ụda, TV
CES 2018 ji ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ amalitekarịsịa na ahịa telivishọn. Kemgbe afọ a, ọtụtụ ụdị na-eji ohere a eme ihe iji weta akụkọ ha. Panasonic bụ otu n'ime ha nke na-eweta ọkwa ọhụụ nke telivishọn OLED. Otu uzo nke anyi zutere na 2017. Ugbu a, uzo a di ohuru. Dị ahụ ahọrọla ịgbado mbọ ya na ịnye ogo onyonyo ọkachamara.
N'ihi mmekorita ya na Hollywood Deluxe ha nwere olile anya inweta ogo onyonyo ka mma. Panasonic na-atụ anya na ọ ga-adị mma nke na ọ na-abịarute ụkpụrụ sinima dịka o kwere mee. Kedu ihe ọzọ ụlọ ọrụ ahụ na-echere anyị na CES 2018?
1 Newdị ọhụrụ anọ
2 HDR10 + metadata ike
3 Panasonic hi-nchapụta ọdịyo
Newdị ọhụrụ anọ
Ọ bụ ngụkọta nke ụdị ọhụrụ anọ nke Panasonic na-eweta. Ha dị iche iche. Anyị zutere: 1000-anụ ọhịa EZ77 na FZ950 na FZ800, dị na 65- na 55-anụ ọhịa. Na ụdị niile nke ika anyị na-ahụ ihe ọhụrụ HCX 4K nhazi, nke na-achọ imeziwanye ihe Ihe ngosi HDR karịrị OLED. Na mgbakwunye, ọ na-enye ọdịiche dị mma na agba gamut, nke dịka akara ahụ si ekpuchi otu ijeri shades.
Ihe nhazi a tinyere tebụl 3D LUT ndị ọkachamara (Lee Tebụl). Ndị ụlọ ọrụ na-emepụta ihe na Hollywood na-eji tebụl ndị a eme ihe ma na-enyekwa agba ndị ziri ezi karị. N'ihi nke a, a na-agbazi oghere agba ma na-egosipụta ihe nkiri dịka onye nduzi ha kere ha.
Flex FZ950 na FZ800 jikọtara ọnụ Ntọala nyocha Imaging Science Foundation (isf). Ha gụnyere nke ọhụrụ isi ihe, 2,55% nchapu ma dakọtara na Portrait Display's CalMAN yana arụmọrụ AutoCal. Nke a pụtara na ha maara ihe ma a bịa na mmezi na ndị hụrụ nnukwu onyonyo.
HDR10 + metadata ike
Ihe ngosi nke a Panasonic ahapụla anyị oge na-adọrọ mmasị. Anyị na-anụkarị okwu ndị na-adịchaghị iche, n'okwu a ọ gbasara "HDR10 + ike metadata". Kedu ihe ọ bụ? Ọ bụ teknụzụ ga-enyere aka -eme ihe ike di omimi nke ihe oyiyi ọbụlagodi na ebe isi mmalite enweghi akwukwo asambodo.
Dabere na Panasonic ha atụwo ọdịnihu na teknụzụ ọhụrụ a. Ọzọkwa ndị ya na ya so. Ebe ọ bụ na ha telivishọn ha ga-akwado ọkwa HDR n'ọdịnihu nke ekwuputabeghị. Yabụ na ha ga - abụ onye izizi ga - emekọrịta. Igwe onyonyo niile dị na ụkpụrụ HDR10 na HDR10 + dị ka ụlọ ọrụ ahụ kwadoro.
Na mgbakwunye, ha niile nwere Ultra HD Premium na THX asambodo. Na mgbakwunye, ụlọ ọrụ agbakwunyela njikarịcha Ọnọdụ Dynamic 'na Nchekwa Onwe Nchekwa HDR. A na-eji nke a eme ihe maka onye ọrụ ọ bụla, ndị na-achọghị ntọala mgbagwoju anya na nhazi ma ọ bụ okwu mgbagwoju anya. Ya mere, echiche ahụ bụ na ha nyochaa ihe oyiyi ahụ ma gosipụta mma kacha mma na-akpaghị aka.
Panasonic hi-nchapụta ọdịyo
Ogo onyonyo dị mkpa maka Panasonic, dịka o siri doo anyị anya rue ugbu a. Ma, ọ dị mkpa na ụlọ ọrụ anaghị eleghara ọdịyo anya. Ihe na emebeghị, dika aturu anya. Ebe ụlọ ọrụ ahọpụtala oge a maka teknụzụ nke ya. Ọ bụ "Tuned site Technics" e mere iji nye ezi etoju nke audio enweghị saturation. Ihe ga-adị ogologo oge ka anyị na-ekiri ihe nkiri, ihe ngosi TV ma ọ bụ na-egwu egwuregwu.
Ọ bụ teknụzụ nke mejupụtara ọkà okwu na-agbanwe agbanwe nke kewara n'ime nkeji asatọ. Mgbe ahụ, na otu ọkà okwu enwere woofers anọ, squawkers anọ na tweeters abụọ. Na mgbakwunye inwe quadruple passive radiator nke na-eje ozi ịbawanye bass. Na nkenke, ọ na-ada ụda ma kwe nkwa nnukwu mma.
Panasonic ekwuola na a ga-enwe mmụba 40% na ọdịyo karịa otu ọkwa ahụ n'afọ gara aga. Mana ihe a niile na-emezu n'enweghị mkpa ịbawanye nha ma ọ bụ mee mgbanwe na nhazi. Ya mere enweela ezigbo ọrụ site na ika na nke a. Ihe ndị ahịa na-atụ anya ka ha jiri kpọrọ ihe.
A ga-ebupụta ụdị niile Panasonic anọ na ọkara mbụ nke 2018, na Europe na United States. Mana egosiputaghi oge o bu. Ọnụ ego ha ga-eji rute ahịa a amaghịkwa. Anyị nwere olile anya na Panasonic n'onwe ya ga-akwado nke a n'oge na-adịghị anya. Kedu ihe ị chere maka ụdị ọhụrụ ndị a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Foto na ụda » TV » Panasonic gosipụtara OLED TV ọhụrụ ya na CES 2018
Ngwaọrụ kachasị mma nke 2017